Server OS တွေကို ဘယ်နားကနေရယူနိုင်မလဲခင်ဗျာ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » Applications, Operating Systems & E-books » Operating Systems » Windows Server
Server OS တွေကို ဘယ်နားကနေရယူနိုင်မလဲခင်ဗျာ
Windows Server Windows Server OS များ ထားရှိမည့် နေရာဖြစ်ပါသည်
Server OS တွေကို ဘယ်နားကနေရယူနိုင်မလဲခင်ဗျာ....
ပြန်စာ - Server OS တွေကို ဘယ်နားကနေရယူနိုင်မလဲခƚ
Server OS ဆိုရင် အတော်များများ လင်းနစ်ဆာဗာ ကိုအသုံးများတယ်
ကိုဖိုးလမင်း က ဘက်အမျိုးစာကိုလို ချင်တာလဲ
လင်းနစ်ဆာဗာ ထဲကအသုံးများတဲ့ ဆာဗာာရှင်များကို ကျွန်တော်သိထားသလောက်ရှာပေးလိုက်မယ်
လင်းနစ်ဆာဗာတွေ ထဲမှာ ကျွန်တော်ကြိုက်တာက centos သုံးရတာလဲလွယ်ကူတယ်
Microsoft Windows Server 2008 (32-bit) အတွက်
Microsoft Windows Server 2008 (64-bit) အတွက်
Windows Web Server 2008(x86 and x64)
နောက်ရှိသေးတယ် red hat တို့fedora ..............
အောက်ပါအသင်းဝင် 14 ဦးတို့မှ thureinsoe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ဂျိုးe, ဖိုးနိုင်, မျိုးဟန်ထက်, နေမင်းမောင်, မောင်ပေါ်ဦး, Bayint Naung, bonge, flammableice, g00gle, kokhing, KznT, sAnDViper, Zin Ko
Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition လေးလည်း Full ဗားရှင်းလေးလိုချင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ
ကျွန်တော့်မှာ product key မရှိလို့ပါ
Originally Posted by ဖိုးလမင်း
ကျွန်တော့်မှာ product key မရှိလို့ပါ
ဆိုတော့ Windows Server 2008 အခွေတော့ ရှိတယ်ထင်ပါတယ်။ အဲ့တော့ Product key မလိုတဲ့ MICROSOFT WINDOWS7AND SERVER 2008 ACTIVATOR တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူက ကျွန်တော်တို့ သုံးနေကျ Activator တွေနဲ့ မတူဘူး - မတူရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက IR4 3.1 ဆိုတာ
1. Windows ကို Activation လုပ်တဲ့ နေရာမှာ Patches, Cracks, Loaders တွေကို မသုံးချင်သူတွေ အတွက် သီးခြားထုတ်ထားတဲ့ ဖြေရှင်းနည်း တစ်မျိုး။
2. IR4 ကို တင်ပြီးသွားရင် Rearm task က ရက် ( ၃၀ ) တိုင်းမှာ နောက်ကွယ်ကနေ တစ်ကြိမ်ပုံမှန် Run ပေးပြီး Windows ကို အမြဲ trial အဖြစ်နဲ့ အသက်ဆက်ပေးထားနိုင်တယ်။ tril ဆိုလို့ ဘာမှ စိတ်ထဲ စနိုးစနောင့် ဖြစ်စရာမလိုဘူး Windows ဆိုတာ trial အဖြစ်နဲ့ သုံးရလည်း features လျော့ခံရတယ် ဆိုတာ မရှိဘူး - ပုံမှန် သုံးနေကျ Windows တွေကို features ပြည့်သုံးနေလို့ရတယ်။ Windows ဆိုတာ Trial ဖြစ်နေသမျှ Genuine ပဲ။ ဘယ် Updates မဆို သွင်းလို့ရတယ်။
3. တကယ်လို့ IR4 ကို စိတ်မချလို့ စက်ထဲမှာ အမြဲ သွင်းမထားချင်ဘူး ဆိုရင်လည်း ဖြစ်တယ်။ လိုတဲ့ အချိန်မှ ပြန်တင်ပြီး Run ခိုင်းလို့ ရတယ်။
4. IR4 က Windows 7/Server 2008 R2 32/64bit အားလုံးမှာ သုံးလို့ ရတယ်။
5. ဘယ် system files ကိုမှ modify မလုပ်ဘူး။
6. သုံးနည်းကလည်း ဘာမှ ခက်ခက်ခဲခဲ မရှိဘူး - extract လုပ် run - activate ကို click ဒီလောက်ပဲ။
DOWNLOAD MICROSOFT WINDOWS7AND SERVER 2008 ACTIVATOR!!
IR4 3.1.rar (808 KB)
Virus total report ကို ဒီနေရာမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂျိုးe, ဖိုးလမင်း, မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, နေမင်းမောင်, မောင်ပေါ်ဦး, bonge, g00gle, minthumon, thureinsoe, tu tu
ကိုဖိုးလမင်း Microsoft Windows Server 2008 Enterprise (32-bit) 6.0 Build 6001 RC1
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ thureinsoe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂျိုးe, ဖိုးလမင်း, ဘုန်မောင်, မျိုးဟန်ထက်, အမြင့်ပျံလင်းယုန်, နေမင်းမောင်, မောင်ပေါ်ဦး, bonge, g00gle, minthumon
13-05-2011, 11:40 AM
ko thureinsoe and ko KznT .
thsalot ...
by the way, if 30 days is full, can my windows remember the setting.....?
ဘာကို ရည်ရွယ်ပြီး ဘာအတွက်နဲ့ ဒီမေးခွန်းမေးတယ် ဆိုတာ ဆက်စပ်လို့ မရပါဘူး - ဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မာလိုမေးပါ - အင်္ဂလိပ်လို မေးမယ်လို့ စိတ်ကူးရှိရင် လိပ်ပတ်လည်အောင် ရေးပြီးမေးပါ - တစ်ကြောင်းစာတွေက လိုတိုရှင်းပေမယ့် ပြန်ဖြေပေးဖို့ရာက Options အများကြီး ကွဲပါတယ်။
Last edited by KznT; 13-05-2011 at 11:57 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဘုန်မောင်, မျိုးဟန်ထက်, နေမင်းမောင်, g00gle, minthumon, thureinsoe
18-05-2011, 01:11 AM
ဆောရီး အကို ကျွန်တော်အဲ့နေ့က ဇော်ဂျီဖောင့် အင်စတောမလုပ်ရသေးလို့ eng: လို မရေးတတ်ပဲရေးလိုက်တာ
trial 30 days ပြည့်သွားရင် နောက်ထပ်ပြန်ပြီး trial ကို အသစ်ဖြစ်စေမယ်ဆိုတော့ registry ထဲမှာများပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်မလားလို့ပါ
ဥပမာ user profile တို့ ဘာတို့ပေါ့ဗျာ
အခုလို ဂရုတစိုက်ဖြေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ခင်ဗျ
27-06-2011, 12:31 AM
လပြန်စာ - Server OS တွေကို ဘယ်နားကနေရယူနိုင်မလဲƙ
Windows Server (R) 2008 Standard
Windows Server (R) 2008 Enterprise
Windows (R) Web Server 2008
Windows Server (R) 2008 Datacenter
Key တွေနဲ့ အဆင်မပြေခဲ့သော်..crack
This is how you activate your Windows Server 2008 copy(any version/language):
*After installing Windows Server 2008 to your computer,click Start->Run and type Services
(or go to Start->Progem->Admin tools and choose services from there ).Go to Services->Software
Licesing and chose "Disabled"as Startup methad.
*Reboot your computer,When reboot go to
and delete the tokens.dot file there ,replacing it with the one from this package
Yat again,go to services->Software Licensing and choose "Automatic"as Stareup method.
*Run vistaactivation.exe file (This Link),activate your computer as if it was running Vista Ultimate.(Should any errors,Just neglect them.)
Restart your compyter.
*After reboot,Windows server 2008 will now ask for acd-key,usethe following one:
6F2D7-2PCG6-YQQTB-FWK9V-932CC  , Waitafew minutes it for it to activate,et voilal Now
you've gotaactivated windows Server 2008 version.
So what's the downside with all this?The computer is semi-recognized as Vista Ultimatenow,
but server roles should still apply as if they were part of the Server 2008 version.
Enjoy your activated Windows Server 2008 copy,if you like this product,you should buy it.
Thanks to T*** for this crack
ီDownload Link vistaactivation.exe
Last edited by မျိုးဟန်ထက်; 28-06-2011 at 07:48 PM..
ဂျိုးe, flammableice, g00gle, minthumon
27-06-2011, 12:37 AM
Last edited by မျိုးဟန်ထက်; 27-06-2011 at 12:56 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ မျိုးဟန်ထက် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂျိုးe, flammableice, g00gle, minthumon, thureinsoe
ပို့စ် 120 ခုအတွက် 2,066 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
windows server 2008 serial key များကို မရေးတော့ပဲ word file ကို zip ဖိုင်ချုပ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..ဒီနေရာမှာ ရယူနိုင်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ ကိုစံငြိမ်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂျိုးe, မျိုးဟန်ထက်, မောင်ပေါ်ဦး, bagothar85, flammableice, g00gle, PyaitSone, tu tu
Find More Posts by ကိုစံငြိမ်း
ပို့စ်3ခုအတွက်4ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အပေါ်မှာ ဆွေးနွေးထားတဲ့ ညီအစ်ကိုအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်က လက်ရှိ Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2 ကိုအသုံးပြုနေပါတယ်။
Windows Server 2008 ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုချင်လို့ပါ။
အဲ့ဒါ လက်ရှိ ၀င်ဒိုးအရဆိုရင် ဘာတွေလိုအပ်နိုင်ပါလဲ၊ ဘယ်အမျိုးအစားနဲ့ သင့်တော်မလဲ၊ ပြီးတော့ ဘယ်လို ပြောင်းလဲရမလဲ ဆိုတာတွေ သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Microsoft ကရှင်းပြထားပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စာ အားနည်းလို့ နားမလည်ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အစ်ကိုတို့ ကူညီပေးပါဗျာ။ Windows Server တွေက အသုံးနဲတော့ အခက်တွေ့နေလို့ပါ။
အစ်ကိုတို့ရဲ့ ကူညီမှုကို စောင့်မျှော်နေပါ့မယ်။
Last edited by ဂျိုးe; 26-09-2011 at 12:54 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ဂျိုးe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဂျိုးe
ပို့စ်6ခုအတွက် 8 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
internet sharing သုံးပါတယ် ဆာဗာ ထောင်ချင်လို့ပါ ဘာဆာဗာကောင်းလဲ ဘယ်လိုသုံးရလဲ ဆို တဲ့စာအုပ်ကလေးပါရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ် Bandwidh ပါ ခွဲသုံးချင်လို့ပါ
Find More Posts by ဖိုးနိုင်
23-07-2012, 01:04 PM
downloads လုပ်လို့ရမဲ OS link ပေးကြပါခင်ဗျား Os အသုံးပြုပုံ ပြုနည်းနဲ့ မြန်မာ Ebook ပါ ပါ ရင်အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ
လင့်ခ်က မရတော့ဘူးအကိုရေ..... ပြန်တင်ပေးပါဦး.......
Family AIOs ဘိုးတော် Applications 43 08-09-2011 09:12 PM
Calculator ထဲမှာ Data တွေကို ဖွက်ထားရအောင မုန်းရခက် ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစများ401-08-2011 02:08 PM
လက်တွေ့လေ့လာ... Squid Proxy Server sankhaingphyo Software များဆိုင်ရာ 28 07-07-2011 10:38 AM
Proxy Server အကြောင်းသိကောင်းစရာ မောင်ပေါ်ဦး Internet နှင့်ဆိုင်ရာများ024-07-2010 11:52 AM